hoy ny mpahay toekarena, Rado Ratobisaona, nanazava ny fahitany ny mety ho fiantraikan’ny fipariahan’ity valan’aretina ity amin’ny toekarena malagasy. Mety ho voka-dratsy ho an’ny firenena tsy mamokatra toa an’i Madagasikara anefa io tsy fahafahana mifamezivezy io, hoy izy, satria isika manafatra mihoatra ny 80%-n’ny entana ilaintsika amin’ny fiainana andavanandro. Mety hiteraka krizy anatiny sy tsy fisiana entana na “penurie” io toe-javatra io, hoy izy. Mety ho vokatra tsara koa anefa satria hanery antsika hamokatra bebe kokoa hahazoantsika manokatra ny tsena anatiny mihoatra amin’ny tsena iraisam-pirenena. Ny famadihana ny hoe isika indray no mamokatra ny filantsika hatramin’izay io anefa, hoy hatrany ny tenany, dia ilana tetikady, renivola, fahaiza-manao, ilana masinina izay hanentanana ny sehatra tsy miankina sy ny fitondram-panjakana mba hisian’ny atao hoe “dinamysme economique” mba hahafahana misoroka ilay voka-dratsy voalaza teo.